အရေးတစ်ကြီးလိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း — MYSTERY ZILLION
နေရာမှန်လား မမှန်လားမသိဘူး ဘယ်မှာတင်ရမှန်းမသိလို.ဒီမှာဘဲတင်လိုက်ပြီး။ ညီအစ်ကိုတို.ရေ ကျွန်တော်တို. အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပဌာမ်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဘို. ကျွန်တော်ကဘိတ်စာလုပ်ဘို.တာ၀န်ယူထားပြီး။ ဘိတ်စာလုပ်ဘို. မြန်မာပြည်က ထုပ်တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ဖောင်းတွေလိုချင်လို.ဘယ်မှာရနိုင်လည်းဆိုတာပြောကြပါအုံး။ ရှိတဲ့သူများလည်းကုသိုလ်ဖြင့် ကူညီကြပါအုံးနော်။ ဖိတ်စာက ဒီလမကုန်ခင်အပြီလုပ်ရမှာပါ။ တကယ်လို. ဒီဇိုင်းကူညီပေးလို.ရရင်လည်း ကျွန်တော်ကို pm နဲ.ပို.ပေးလိုက်ပါနော်။ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့